Bancc™️ - Ọganihu, Bam, Bancc!
Onye nkwado & ndị okike
Ngwa nkwado (N/A)
Banc™️ na-emepụta ikpo okwu ga-esote Soro anyị na njem FinTech na-esote nke narị afọ. Maka ndị mmadụ, ndị mmadụ. Akwụkwọ edemede Jiri ụgwọ 0% gbanwere & zụta crypto BancDex™ ️ bụ mgbanwe mgbanwe/Aggregator nke na-anakọta mgbanwe dị iche iche na Binance Smart Chain (BSC), Ethereum (ETH) & Polygon netwọk n'ime otu ngwa. Mwepụta ngwa Ngwa Nweta ihe ruru 500% APY na BancStaking™️ BancStaking ™ bụ ikpo okwu dị egwu nke na-enye vault Beta, Alpha, Omega na Valhalla dị iche iche. Mwepụta ngwa Ngwa BancDAO™️ na-agba ndị obodo ume ime mgbanwe, otu ugboro BancDAO™️ bụ Ngwa ịtụ vootu gọọmentị agbasasịghị maka obodo Bancc™️ iji weta atụmatụ wee nweta nleba anya ole amụma a chọrọ. Mwepụta ngwa Ngwa Nwere mmasị na mmekorita? Gakwuru anyị taa, anyị ga-edozi ihe bara uru maka akụkụ abụọ ahụ Kpọtụrụ anyị Ngwa
Boom, Bam, Bancc…⚡️
Bancc bụ ụlọ ọrụ Blockchain nke na-esetịpụ ụgbọ mmiri n'ịmepụta usoro ego enweghị isi na-esote site na ijikwa ohere dị n'etiti teknụzụ dị ugbu a na ohere blockchain.
Zụrụ sBanc ebe a!
Ndị mgbasa ozi kacha amata anyị
Ị nwere ike mara anyị na ...
Ọnụ ahịa CoinGecko
Otu nzọụkwụ n'otu oge
Afọ atọ na-eme
Njirimara Bancc Ecosystem
Ahịa zuru ụwa ọnụ & cryptocurrency ejedebere na nhọrọ ego dị oke ọnụ yana ngwa ngwa iji. Ịhapụ nnukwu ahịa na-emebeghị aka. N'ịbụ ndị dị mkpụmkpụ maka ụzọ ndị ka mma, nke ahụ bụ ihe anyị rapaara ruo ugbu a ...
Ndị na -enyefe ego
Zipụ ego n'ụwa niile n'ime nkeji 1 site na iji ngwa anyị dị mfe iji
Ego & Azụmahịa
Jiri ngwa anyị dị mfe iji zụọ cryptocurrency ọkacha mmasị gị ngwa ngwa
Jiri debit / kredit BancCard ️ kwụọ ụgwọ ma ọ bụ jiri obere akpa cryptocurrency kwụọ ụgwọ ozugbo. Ego gị, nhọrọ gị
Tọlite ​​ụlọ ahịa dị n'ịntanetị na ọpịpị ole na ole site na iji Banc™️ Marketplace
Ngwaahịa & Ọrụ Bancc™
BancSwap™️ bụ mgbanwe agbapụrụ agbachapụ na nkwekọrịta smart nyochara iji bido iwulite ego maka ụzọ abụọ nke token Banc na-abịa dị ka BUSD, USDT, WBNB ma ọ bụ nye ego maka akara ọ bụla na gburugburu Binance Smart Chain.
BancYield™️ bụ ikpo okwu ịkụ mkpụrụ agbasasịghị nke ọma maka gị ka ị rụọ sBanc n'ụzọ dị mfe na agbamume. Nye otu n'ime ụzọ abụọ ahụ wee nweta ụgwọ ọrụ na sBanc.
BanccCEX™️ bụ mgbanwe n'etiti ebe ị ga-enwe ike ịzụ ahịa ihe ruru 160+ ụzọ abụọ na nnukwu ego nkwado nke ego crypto ndị ọzọ dị ka Bitcoin, Ethereum, Dash wdg. ike ịzụ ahịa kamakwa nhọrọ ịgbazinye / ịgbazinye ego maka ndị ọrụ ka ha nweta ego.
BanccAccount™️ bụ akaụntụ nkeonwe gị iji nwee ntụle ngwa ngwa nke fiat na akụ cryptocurrency gị. Nye iwu BancCard™️ gị wee malite ịchekwa ụgwọ na azụmahịa niile mgbe ị debere akara gị na BancChain™️.
BanccNFT™ ️ ga-abụ akụkụ pụrụiche na oke nke NFT maka ndị ọrụ iji nweta aka ha nke ga-enwe ụdị atụmatụ dị iche iche maka NFT ọ bụla. Atụmatụ ga-adị n'etiti ahịrị nke tupu ịtụ nke kaadị debit na-abịa na-enweghị ụgwọ maka ịzụ ahịa.
BancPay™️ bụ ụzọ ịkwụ ụgwọ maka ego fiat na ego crypto. Nabata onye ọ bụla n'ebe niile Visa, MasterCard, American Express wdg wee bufee ya ozugbo site na BancCex™️ ka fiat ma ọ bụ cryptocurrency.
BanccMerchant ™ ️ bụ sistemu ọnụahịa ire ere zuru oke iji nye mgbanwe na ịdị mfe maka onye ahịa ọ bụla ịnakwere & malite ire ngwaahịa / ọrụ ha n'ụwa, ma n'ịntanetị na offline.
Enwere ike imekọrịta na ọnụ
Azụmahịa na ọsọ ọkụ & ruo 10,000 azụmahịa kwa nkeji
Nweta $BANC site n'ịgba ọsọ
ihe nkwado BancChain™️
Mkpụrụ ego gị, ohere gị
Jiri ihe karịrị 100+ akụ gafere n'usoro
Ime ngwọta dị mfe
Emere onye ọrụ enyi na enyi maka onye ọ bụla
Gịnị kpatara BANCC?
Otu n'ime nkwenye anyị bụ isi bụ na mkpụrụ ego/token Crypto ọ bụla kwesịrị inwe uru. Ọtụtụ ọrụ na-atụfu akụkụ ahụ mana anyị anaghị eme ya. $BANCC ga-eji ikpo okwu anyị dozie nsogbu ụwa n'ezie na nke ahụ bụ ihe na-eme ka anyị dị iche.
Onye ọrụ na-azụta Bancc na-akpaghị aka.
Ndị ọrụ na-eziga zụrụ
$Banc nye onye ọrụ achọrọ
FIAT ma ọ bụ CRYPTO
Ndị ọrụ na-enweta bancc ma nwee ike ịgbanwere fiat ma ọ bụ crypto ọ bụla
aka ma ọ bụ na-akpaghị aka na-ahọrọ ha.
Dị Mfe & Ọkachamara
E kere ọhụụ
Emepụtara echiche mbụ. Anyị chọrọ ịmepụta ngwaahịa na-enyere aka ịkwụ ụgwọ agafe ngwa ngwa, ụgwọ dị mfe na nke dị ala na ahịa. Nnyocha ahụ kwubiri na ndị na-enye ndị na-enye ugbu a na-enye ọrụ nke oge ochie, enweghị ntụkwasị obi na ọnụ ahịa dị elu maka ndị ọrụ. Anyị bịara na nkwubi okwu na iji nye ihe ka mma anyị enweghị ike ịbụ nanị na otu ọnọdụ akụ na ụba ọha na eze. Anyị kpebiri imelite ma degharịa ihe anyị na-akpọ "ikpo okwu" ugbu a.
Akpọlitere okirikiri mkpụrụ $50K
Anyị ji mkpụrụ $50K gara nke ọma wee nweta ego ọzọ iji malite mmepe nke ikpo okwu. N'ọgwụgwụ 2021 anyị degharịrị aha ma kwalite teknụzụ anyị kwenyere na ọ dị mkpa iji mepụta njikọ, nke ọma yana gụnyere blockchain.
✅ - ire ​​ọhaneze na Binance Smart Chain(PinkSale)
🚀- Nnukwu mkpọsa ahịa (na-aga n'ihu)
⚡️- BanccCEX™️ (Mgbanwe nke etiti)
⚡️- ndakọrịta igwe mebere Ethereum
⚡️- Ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ
❇️ - Ndị ọzọ na-abịa…
⚡️- Sistemụ Ọrịre
Ntọhapụ ikpo okwu
⚡️- ikpo okwu ikpeazụ nwere ngwaahịa niile dị n'elu n'ime otu ngwa
Ndị otu ahụ
Anyị bụ ihe kpatara Crypto ga-abụ isi. Mmejọ nke ụlọ ọrụ ịkwụ ụgwọ na-achọ ịbụ ebe nchekwa nke oge gara aga. Oge erugo maka crypto ime ihe e mere crypto iji mee - dozie nsogbu ụwa n'ezie. Site na mkpụrụ ego $BANCC anyị yana atụmatụ niile na-abịa na ya - anyị kwenyere na anyị bụ ọdịnihu nke ụlọ ọrụ ịkwụ ụgwọ ma anyị na-akpọ gị òkù na njem ahụ.
Onye nchoputa & onye isi teknụzụ
Batara na oghere crypto kemgbe afọ 13 wee mepụta na 14 afọ azụmahịa mbụ ya na Benjamin, na-ewu weebụsaịtị na ngwa. O nwere ihe omuma kachasi ihe omuma na ihe omuma maka mmepe blockchain, aku na uba na akụrụngwa maka iwulite teknụzụ dị elu. Ọ bụ akụkụ dị mkpa maka iwulite ọganihu Bancc.
Benjamin ugbu a bụ ọkachamara na-eme egwuregwu na onye na-etinye ego na ihe onwunwe, ebuka na crypto. Benjamin bụ onye mmekọ obere na cha cha n'ịntanetị crypto. Benjamin malitere ụlọ ọrụ mbụ ya mgbe ya na Nils-Julius dị afọ 15 ma nwee mmasị ịhụ ohere ndị ọzọ na-apụghị ịhụ ha.
Chief Financial aghoputara
Isak abụrụla onye na-etinye ego na-aga nke ọma kemgbe ọ dị afọ 18 ma bụrụzi onye isi oche nke ụlọ ọrụ ọkwá nkà na-aga nke ọma. Isak nwere ikike dị mma ịkatọ ihe na ịhụ ihe n'ụzọ dị iche. Na nnukwu ahụmahụ akụ na ụba na echiche siri ike Isak maara ihe ọ na-ewe iji mee ka azụmahịa na-aga nke ọma.
Oskar ga-emecha n'oge adịghị anya onye nrụpụta tojupụtara zuru oke. Oskar nwere ọmarịcha anya maka imepụta na imepụta weebụsaịtị, ngwa na ihe niile na-abịa na usoro ime ya. Oskar ga-abụ ezigbo nkwado maka ịmepụta na iduzi usoro nhazi nke ikpo okwu Banc.
Mirian bụ nnukwu mgbakwunye na otu ahụ, nwere nka dị egwu na nghọta ịzụ ahịa. Mirian ga-edozi, wulite ma lekọta ahịa nke Bancc. Mirian na-asụ ma bekee na Spanish nke ọma yana site n'ịsụ asụsụ abụọ Bancc nwere ike nweta ndị ọrụ karịa site na nkwado, ọdịnaya & mgbasa ozi ọha.
Nka na ụzụ ndụmọdụ
TC-Crypto nwere ahụmịhe ogologo oge na nhazi netwọkụ yana ntọlite ​​​​na ụlọ ọrụ telecom. TC-Crypto anọwo na anyị n'ezie kemgbe ụbọchị mbụ na ọ na-anụ ọkụ n'obi na nke ukwuu maka ọrụ ahụ. Anyị na-ahụ ike dị ukwuu site na ihe ọmụma na nkà ya maka akụkụ ngwaike / ngwanrọ nke blockchain.
Nick nwere oke ịnụ ọkụ n'obi maka crypto na Bancc. Site na ihe omuma ya gara aga na ahia & mmekorita. Nick ga na-elekwasị anya n'ịgbasa mmata banyere ọrụ ahụ site na nhazi ahịa ahịa na ịchọta nnukwu ohere mmekọrịta.
Raza bụ onye edemede edemede mara mma ma hụ cryptocurrency n'anya nke ukwuu nke na ọ malitere ide banyere ya. Dabere na Pakistan, Raza ga-abụ onye edemede mbụ maka Bancc, na-emelite obodo na mgbasa ozi gbasara ihe ndị na-akpali akpali na-abịa!
Gbaa mbọ hụ na isonye na sonye na nnọkọ AMA kwa izu!
Kedu otu Bancc™ nwere ga-esi mpi Crypto.com, Binance wdg?
Isi echiche n'azụ ụlọ ọrụ ọ bụla na-aga nke ọma na-elekwasị anya na uru n'ezie. Isi ihe dị iche n'etiti Bancc™️ na ụlọ ọrụ ndị a bụ na ụlọ ọrụ ndị a chọrọ ịkpata nnukwu ego dị ka o kwere mee maka ndị na-eketa òkè ha na ndị na-akwado ha ka a na-ahụta dị ka ndị mmekọ n'ime atụmatụ ụlọ ọrụ ha na ụdị ego ha nwetara. Bancc na-eweta otu ụdị ụdị ego a ga-enweta mana maka anya "ọha". Mbelata mkpokọta ego maka Bancc na ịbawanye ya maka ndị sonyere na blockchain.
Kedu otu Banc™️ ga-esi mee ihe ndị a niile?
Teknụzụ bụ akụkụ na-adọrọ mmasị nke evolushọn yana dị ka anyị hụworo na Bitcoin, karịsịa afọ iri gara aga. Ihe na-amalite n'ike n'ike karịa ka ọ dịbu. E hiwere Bancc na nkwenye na teknụzụ kwesịrị ịdị maka onye ọ bụla na ime ka o siere ndị ọrụ ike imekọrịta ihe abụghị ụzọ anyị kwenyere na ọ dị mma. Site na ijikọ teknụzụ ndị dị ugbu a nwere akụkọ ihe mere eme gara aga nke na-egosi nkwụsi ike na ohere maka uto Banc™️, ga-enwe ike imechi ọdịiche dị n'etiti ngwa ụlọ akụ mgbe niile na ikuku cryptocurrency.
Gini mere Bancc ji choro?
Ụwa na-agbanwe ma cryptocurrency nọ ebe a ịnọrọ. Naanị otu ihe, ụgwọ. Ọ bụrụ na ị na-ele ya anya n'ozuzu ndị ọrụ na ihe atụ na-eji remittance ọrụ. Ụgwọ bụ otu ihe ahụ. Ọ dịghị onye chọrọ ịrụ ọrụ n'efu mana ịkwụ ụgwọ dị elu na-emebi uto nke netwọk ahụ. Izipu $10 nke uru ekwesịghị ịdị na-eri 60$ n'oge mbụ. Ndị ọha na eze ga-achọ ihe dị ọnụ ahịa dị irè ma dị mfe iji karịa ọrụ ndị a na-enye ugbu a. Bancc™️ na-edozi nsogbu a n'ụzọ enweghị isi site n'ịmepụta akụ na ụba dị mma na nke na-adịgide adịgide nke na-adabereghị n'otu akụkụ, kama ndị ọrụ zuru oke na netwọk.
Debanye aha na akwụkwọ akụkọ taa.
Jide n'aka na ị na-emelite mgbe niile na ihe ndị na-eme na Bancc, nọrọ ebe ahụ ma ọ bụ nọrọ na square.
Na-abụ abụ ugbu a
Site na ịbanye, ị kwenyere na anyị Usoro & Ọrụ.
Nwebiisinka © 2022 Banc™️ | Kwadoro site na Bancc™️⚡️
Ozi nkwekọrịta Smart
Aha Token - Bancc
Tika - sBanc
Ụgwọ ọrụ Token - BTC
Ụgwọ Liquidity - 1%
Ụgwọ azụta azụ - 0% (ọkụ aka)
Ụgwọ ntụgharị uche - 7%
Ụgwọ ahịa - 3%
Mkpokọta ụgwọ – 11%
Ọnụ ego: sBanc